यो कस्तो चाड – तीज ?
सानो छँदा तीज आउँदा आमाको पछि लागेर मामाको घर जाने गर्दथ्यौं म र मेरो भाई । आमा, छामाहरु र ठूलीआमाहरुको भेटघाट हुने त्यतिखेरको तिजले हाम्रा आमाहरुलाई एउटा औसर जुटाउने गर्दथ्यो – टाढाटाढाका दिदीबहिनीहरुलाई करिब एक बर्षपछि एकै ठाउँमा जुराउने । आमाहरुले वर्षभरी अनुभूत गरेका दुःखसुखका कुराहरु सुन्न पाउँदा अर्कै किसिमको आनन्द आउने गर्दथ्यो, मलाई पनि । मामाकै घरको तगारोबाहिर रहेको खुल्ला चौरमा गाउँका अरु चेलीबेटीहरु पनि जम्मा भएका हुन्थे, उनीहरुले तीजका भाकामा गाएका गीतहरुले गाउँ नै जुरुक्क पाथ्र्यो । हातका औंला झुराझुरा पर्ने गरी उनीहरुले बजाउने मादलको आवाजले निर्माण गर्ने रौनकका बारेमा शब्दमा म कसरी ब्यक्त गरुँ ? साँच्चीकै भिन्न थियो हाम्रा आमाहरुले उतीबेला मनाउने तिज ।
जति जति मेरो उमेर हुर्कदों छ, उति उति हाम्रा चाडपर्वहरु मनाउने शैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको महशुस गर्दै आएको छु, मैले । तीज, महिलाहरुको महान पर्व भन्ने गरिए पनि कतै यो महिलाहरुकै पहुँच बाहिर जान लागेको त हैन ? तीज बिशेष कार्यक्रमहरुमा निश्चित आर्थिक हैसियत भएका महिलाहरुको मात्र उपस्थिती देख्दा यस्तै अनुभूत गरेको छु मैले, हिजाँल । हिजो यो महिला दिदीबहिनीहरु भेट हुने, सुखदुखका कुराहरु साटफेर गर्ने, माइतीमा दर खाने र रमाईलो गर्ने पर्वका रुपमा परिचित थियो । तर अहिले यो पर्व त्यतिमा मात्र सिमित रहेन । खै ! जमानाअनुसार परिवर्तन हुनुपर्दछ भनेर हो वा नेपाली जनताहरुको आयश्रोतमा बृद्धि भएर हो अचेल दिदीबहिनीहरुले तीजमा गर्ने खर्चको रकम आकर्षक नै पाइन्छ । महंगा राता सारी, रातै चुरा र पहेंलपुर सुनले झकिझकाउ हुने दिदीबहिनीहरुको भीड देख्दा यस्तो लाग्छ – हैन यो तीज हो कि महंगा पहिरन र सुनका गहनाहरुको प्रदर्शनी ?
नारी जातिको उन्मुक्ती र अधिकारको बख्यान गरेर नथाक्ने दिदीबहिनीहरुले नारी विशेष चाड तीजलाई किन नारीहरुको आत्मसम्मानमा बृद्धि गर्ने पर्वका रुपमा मनाउन सकिरहेका छैनन् ? आश्चर्यको विषय छ । पर्व मनाउँदा अनावश्यक तडकभडक र रवाफिलो प्रदर्शनमा किन यतिविधी महत्व दिने गर्छन आधुनिक नारीहरु ? मैले केहि गरी बुझ्न नसकेको सन्दर्भ हो यो, आधुनिक तिजको । समाजमा आफूलाई बौद्धिक नारीका रुपमा अगाडि चिनाउन मरिमेटेर लागेका स्वघोषित बौद्धिक नारीहरुको हुल देख्दा सारै टिठ लागेर आउँछ । किन उनीहरु आफूहरु साँच्चिकै बौद्धिक र सृजनशील भएको प्रमाण कार्य सम्पादनबाट पुष्टि गर्न सक्दैनन ? के उनीहरुको दिमागमा समाजमा रहेका अरु महिलाहरुले लगाएको गहनाभन्दा राम्रो र विशेष डिजाइनको गहना लगाउनु आफूहरुको बैशिष्टयता हो भन्ने छ ? के महंगा पहिरनले एक ब्यक्तिको ब्यक्तित्वको बैशिष्टयताको पुष्टाइ गर्दछ र ? बहस गर्नु पर्ने समय भएको छ । रमाइलो गर्नुपर्छ त्यसमा दुई मत हुने कुरै छैन तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने रमाइलो गर्नुको हद कति ?
आधुनिक डिजाइनका गहनाका महंगा सेट लगाउनु र महंगा ब्रान्डका पहिरन पहिरनुले भद्र ब्यक्तित्वको प्रस्तुती हुँदैन भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्ने दिब्य चेत कहिले आउँला हाम्रा दिदीबहिनीहरुमा ? तीज मनाउने नाममा महिनैभर दर खाने हाम्रा सम्पन्न दिदीबहिनीहरुको ब्रम्हले सडकमा गिट्टी कुटेर छाक टार्ने सिमान्त दिदीबहिनीहरुले खाने दर का बारेमा सोच्न भ्याएको छ होला कि नाइ ? समाजमा रहेका सबै वर्गका दिदीबहिनीहरुको अधिकतम उपस्थिती र संलग्नता रहने गरी तिज मनाउने कार्यक्रमको आयोजना कहिले हुन सक्ला ? र, कहिले होला तीज तडकभडकविहीन ? अलिकति बढी समावेशी ? अलिकति बढी बौद्धिक ?
महिनैभर खान्छन दर हैन कस्तो चाड यो
पहेंलपुर हुने रहर हैन कस्तो चाड यो
परम्परा, संस्कृति जोगाउने ढोंग रची
अस्तब्यस्त पार्छन घर हैन कस्तो चाड यो ?
जय तीज !
यो लेख रूप्से साप्ताहिकका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।